Ukuze wenze Izanusi magic isiko esetshenziswa ezihlukahlukene: amabalazwe, amakhandlela, wax encibilikisiwe, crystal amabhola, potions okuyisimangaliso Wand ekhethekile okuthiwa umlingo.
Into imilingo kakhulu
Ngakho Wand. Lokhu kuncike yakhiwa lenqwaba yezinganekwane. Ngosizo a ummeli wesifazane Fairy waphenduka ithanga ibe Umqeqeshi sokunethezeka, imvukuzane - e umshayeli, futhi Babukeka babahle kepha mine ugly Cinderella - ubuhle zikanokusho. Futhi negagasi izinti efanayo elenziwe encane ugly Nutcracker Prince kanye nezinye izifo kwafeza lukhulu. Ngenxa yalokho, asikwazi ukusho ukuthi Wand Umlingo kuhle kumbe kubi. It kuncike kabani izandla kuba. Akungabazeki ukuthi iningi lethu ngeke baye benqaba ukumbamba le nto encane ku arsenal of izinto zakhe adliwe kakhulu.
Thenga le-accessory kunzima ngempela. It akuvamile ingatholakala isikhumbuzo izitolo noma izitolo esoteric Feng Shui neminyango. Ungakwazi ulungise isimo ngokuzama ukwenza Wand uqobo. Yokuqala impahla - izinkuni. Ngemuva kungcono ukuya kude nemizana, ezindaweni kanye namandla ukuhlanzwa. Kuyinto ihlathi engcono efanelekayo, kuphela Okuyınqo, esikhulu, noma ezintabeni.
Ukubuthana endaweni umgwaqo, tune ngokufanele. Akufanele ukuphazamisa imicabango lungolomzuzwana futhi uhlale. State kwengqondo kufanele bakhanyiselwa, ngoba uya anenzele isimangaliso!
magic Wand kufanele wenziwe isihlahla? izakhiwo yemilingo druids nezinye izizwe endow Alder, umdala, ziyadliwa. kwegatsha Ngakho hizinisi komunye wabo sizithathe. Sika emthini ephilayo noma ziphakamise, Bitches esishwabene liwile? Ochwepheshe ukweluleka ngezindlela ezahlukene. Lungile ukwenza kanjalo: ukuhamba phakathi zasemazweni ulalele imizwa yakho. Ukuze lokho isihlahla wena ukhiphe okuyinto igatsha prilnot kunika - yebo elakho! Kungenxa yokuthi it got Wand engcono ngezandla zakhe. Zama sihlanganise chudotvorchestvo yakho nge ekuphumeni inyanga: Kulesigaba iyona ofanele kakhulu ekudalweni kwazo zonke entsha, kuhle, emangalisayo. Futhi ngokuvamile, abafunda izinkanyezi, abasebenzelana Izanusi uthi: izinto zaqala ku kwenyanga, qiniseka ukuthola kokuphothula.
Ukubuyela emkhankasweni okuqukethwe okune sokuqala silethwe workpiece esaphukileyo ofakwe kasawoti ayegcwele. Lay khona Wand esizayo akufanele kube ngaphansi kuka ngosuku olulodwa. Ukuze igatsha shí "brine", wagqoka isisindo zakhe ezincane, futhi ezenziwe ngokhuni, kodwa ungakwazi ngamatshe, ngensimbi futhi nezinye izinto zemvelo. Sol ahlanze kusuka kunoma iyiphi amandla ngaphandle ongavikela ethonyeni emibi amabutho ezimbi, njll Kungaleso sikhathi kuphela lapho induku esizayo benamandla amandla, "uzizwe", futhi ngeke ulalele igagasi akhanya esandleni sakhe.
Preform kumele ke kahle ezomile. Beka kufanele kube njalo, kaningi ngangokunokwenzeka azikhandle elangeni eliza ngqo. amandla akhe futhi imfudumalo ophilayo futhi kwakudingeka lokhu into imilingo. Ingabe konke ngomumo ukuze kwakhiwe izinto imilingo kungaba ihlolwe ngendlela elandelayo. Ukuze wenze lokhu, mane nje uyeke ucezu legatsha. Uma umsindo Wand magic, liseza, njengomlilo wokuqhuma evuthayo kwesihlahla - it is kahle yomile, nalo ungakwazi ukusebenza.
Isinyathelo okusha - ukucabanga fomu. Uma amagatsha goba engavamile, ke Wavy noma iphothwe ngokukhethekile - siphume siphele kulesi sifundazwe zemvelo. Yemvelo, futhi kungakho ekuqaleni magic ngeke baphazamiseke, futhi liyoshiswa unamathele namandla. Into engcono - iphucuziwe ngokucophelela into ngokususa ungqimba wokuqala cortex.
Stick wenza? Manje kufanele uziyale omlingo. Invent noma ubheke izincwadi ezindala, amazwi umqhele uzungu lapho imvelo awanikeze ubuza izakhiwo Wand imilingo. Qiniseka athembisa ukuthi ngosizo yayo ngeke inflict lutho olubi nemvelo. Rite zifezeke inyanga egcwele, kude abantu phansi, vula kunonyezi. Izandla eyeluliweyo, esikhundleni ngaphansi Wand bakhe, bathi kulolo zungu. I isiko senzeka phakathi kobusuku. Nature ngeke aphendule isicelo sakho - a isivunguvungu esikhulu somoya, ukukhala inyoni, ukulahla ishidi noma kunoma iyiphi enye uphawu. Manje sebenzisa magic yakho Wand lapho uya khona!
Ukuze ufunde ukuthi ungenza kanjani isigqoko nge siqu sakhe ...